सम्पूर्ण गुरुहरुमा समर्पित - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर,
गुरु साक्षात् परमंब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः
हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि घुम्दै फिर्दै असार शुक्ल पक्षको पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा घरआगनमा आइपुगेको छ। गुरु को अर्थ चाहिँ ”गु“ भनेको अन्धकार र “रु “भनेको प्रकाश बुझिन्छ । गुरु पूर्णिमालाई ब्यास पूर्णिमाको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। यस दिनलाई अन्धकारबाट ज्ञानको ज्योति देखाइदिने गुरुहरूको पूजा गर्ने आधार, स-सम्मान गर्ने चलन प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको पाइन्छ।
गुरु बिना कुनै पनि प्रकारका शिक्षाले पूर्णता पाउन सक्दैन। गुरुले दिने ज्ञानमा कसैको असहमति अर्थात् नराम्रो भन्ने कुरा हुँदैन भनी श्रिमत भागवत गीतामा पनि गुरुले दिने ज्ञानको व्याख्या गरिएको छ। कुनै पनि मनुष्यले आजको दिनमा गुरुको पूजा,पाठ,ध्यान अर्थात् स-सम्मान गर्न जान्दछ भने उसको मनोरथ पूर्ण हुने शास्त्रमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। ज्ञानको अर्को रूप नै गुरु हुन् र गुरु बिना हामी हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैन।
मैले सानैदेखि बुझ्ने गरेको कुरा कक्षामा बसेर चक,डस्टर हातमा लिएर पढाउने मात्र गुरु नभएर हामीले जो-जो बाट जे-जे कुरा सिक्न सकेका छौँ ती सबै गुरुहरू हुन्। नियमित चल्नुपर्छ नदीबाट सकेका छौँ, नियमित बहनु पर्छ हावा बाट सिकेका छौँ। बग्दा पवित्र हुँदो रैछ ,हिँड्दा गन्तव्यमा पुग्दो रैछ नदी बाट सिकेका छौँ ।जति चिथोरे,कोपरे पनि अन्ततः हामीलाई अन्न नै फिर्ता दिन्छ हाम्रो जीवन जिउनका निम्ति उत्पादन गरिदिन्छ धर्तीमाता बाट सिकेका छौँ । एकै रातलाई मात्र फुले पनि गाउँ, सहर अनि आँगन भरि सुगन्ध छर्नु पर्छ पारिजात बाट सिकेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण ज्ञात,अज्ञात कक्षामा पढाउने र हामीलाई सधैभरि पढाउने अर्थात् राम्रो बाटो देखाउने सम्पूर्ण मेरा गुरुहरूलाई यसै लेखबाट नमन व्यक्त गर्दछु।
जहिले पनि गुरु को आसन उच्च हुनुपर्छ । उच्च हुनुपर्छ को अर्थ बस्ने आसन मात्र होइन स-सम्मान पनि उच्च हुनुपर्छ । माथि बाटै सबै कुरा तल झर्ने हुन्छन्। यो भन्दै गर्दा मेरा आदरणीय गुरु सरोज घिमिरेले भनेका कुराको याद आयो एक दिन एउटा गाउँमा पुराण लगाउनको लागि यस्तै किसिमको मञ्च बनाइँदै थियो। गुरु बस्ने आसन अगाडि अग्लो बनाइँदै थियो भने भक्तजनहरू बस्ने आसन तल बनाइँदै थियो । एउटा उरन्ठेउलो केटो त्यहीँ नेर प्रवेश गर्‍यो र उसले भन्यो गुरुको आसन किन सधैँ उच्च राख्नुपर्ने ?
अर्कोले भन्यो गुरु त गुरु हो नि ज्ञानले भरिएको मान्छेको आसन जहिले पनि उच्च हुनु पर्छ। उसले भन्यो भक्तजनहरू माथि भएर गुरुहरू तल बस्दा के फरक पर्छ? यी सबै कुरा एक जना वृद्धले सुनिरहेका थिए उनले एउटा गिलासमा पानी भरेर अर्को ग्लास रित्तै राखे अनि त्यो केटोलाई बोलाएर भने ए बाबु यो भरी भएको गिलास बाट रित्तो भएको गिलासमा पानी खन्याऊ त? उसले भरि भएको गिलास माथि उठायो र रित्तो भएको गिलासमा पानी खन्याउँदै थियो वृद्ध मानिसले उसको हात च्याप्प समाएर भने होइन होइन त्यो रित्तो गिलास माथि राख भरी भएको गिलासलाई तल राख अनि पानी खन्याउन । उसले भन्यो कहाँ हुनसक्छ रित्तो गिलास माथि राखेर पनि कहीँ पानी खनिन्छ। अनि वृद्ध मानिसले भने हामी भक्तजनहरू पनि रिक्ता हुन्छौँ तल बस्न जान्यौ भन्ने मात्र हामी भरिन पाउँन्छौ । त्यसैले गुरुहरूको आसन जहिले पनि माथि बनाउनु पर्छ । केटाले कुरा बुझ्यो र त्यो दिनदेखि केटाले यस्तो कुरा कहिले गरेन । हो यस्तै अनेकौँ ज्ञान प्राप्त गराउने मेरा भगवान् रुपी सम्पूर्ण गुरुहरूलाई गुरु पूर्णिमाको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
दुनियाँमा काकाकुल ले पानी पाउँदैन तर वर्षा ऋतु आउन छोडेको छैन, लाटोकोसेराले दिउँसो आँखा देख्दैन तर सूर्य झुल्किन छोडेको छैन, कतिपय बोटहरूमा फूल फुल्दैनन् तर वसन्त ऋतु आउन छोडेको छैन । त्यसै गरी हरेक वर्ष गुरु का प्राण प्यारा विद्यार्थीले छोडेर गए भन्ने सम्झे पनि मेरा प्रिय गुरु हजुरहरूलाई मेरा गन्तव्यका प्रत्येक पाइलाहरूमा सम्झिरहेको छु भौतिक हिसाबले टाढा भए पनि प्रिय गुरु हजुरलाई गुरु पूर्णिमाको दिनमा मात्र होइन प्रत्येक जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षणमा सम्झिरहेको छु। जति गल्ती गर्दा पनि सम्झाई बुझाई गर्ने मेरा प्रिय गुरु भगवान् सम्मान हुनुहुन्छ । लटरम्म फलेको वृक्षझैँ सधैँ भरि झुक्न जानुभएका आफू सँग भएको ज्ञान सम्पूर्ण लाई बाँड्दै हिँड्ने कुनै पनि कुरामा घमन्ड नगर्ने मेरा गुरुहरूलाई हृदय देखी नै नमन व्यक्त गर्दछु।
कुनै पनि ज्ञान बिना मुक्तिको सम्भव नै छैन । त्यसैले सच्चा ज्ञान हासिल गर्नको लागि गुरुकै महत्त्व पर्छ। गुरुको पूजा,पाठ र स-सम्मान गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि ज्ञान हासिल गर्न सक्नेछौँ र गुरुको आर्शिवादले हाम्रो लक्ष्य पुरा हुनेछ।
अन्ततः सबै भन्दा पहिला गुरु माता पिता नै हुन् जसले हामीलाई यस धर्तीमा जन्म दिनु भयो र यो संसार देख्न पायौ, भगवान् चिन्न पायौ,आध्यात्मिकमा लाग्न पायौँ, अरूलाई गुरु भन्न पायौ। त्यसैले सर्वप्रथम मेरा माता पिता पनि स्वयं गुरु हुनुहुन्छ,भगवान् हुनुहुन्छ
उहाँहरूका चरणकमलमा पनि म वन्दना र नमन व्यक्त गर्दै यो वर्षको गुरु पूर्णिमाको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
(जुम्ला घर भएका लेखक बाल गोपाल देवकोटा एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज सानेपा, ललितपुरका ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनी केटिएम दैनिकका नियमित स्तम्भकार हुन। उनले साहित्यिक र समसामयिक विषयमा कलम चलाउन रुचाउँछन्। )
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, साउन ९ २०७८ १२:३९:०५